Ogaden News Agency (ONA) – Gobolka Shabeele oo Gumaad Baahsan uu Gumaysigu Kawado Baryahan.
Gobolka Shabeele oo Gumaad Baahsan uu Gumaysigu Kawado Baryahan.
Wararka naga soogaadhaya Xarunta Gobolka Shabeele ee Godey yaa tibaaxaya inuu baryahan kasocda guud ahaan Gobolka Shabeele xad gudubyo badan oo kadhan ah bulshada rayadka ah ee kudhaqan gobolkaas. Wararku waxay intaas kudarayaan in Ciidanka Maxaysatada Gumaysiga Woyaanaha uu sibadheedh ah xadgudub baahsan oogu hayo shacab kudhaqan Magaalada Godey iyo nawaaxigeed gaar ahaan deegaanka looyaqaano Bangillaad oo udhexeeya Godey iyo Dhanaan. Dhibaatooyinkan aan kala joogsiga lahayn ee Woyaanuhu shacabka Somalida Ogadenia uu kuhayo yaa isugu jirta xadhig, dil, kufsi iyo boob laguhayo hantida dadka rayadka ah ee deegaankaas kudhaqan.
Dhanka kale warar aan kahellay ilo wareedyo lagu kalsoonyahay oo kusugan magaalada Godey yaa noo xaqiijiyay in Jeelka Godey uu buux dhaafay. Jeelkan oo ah midka oogu maxaabiista badan ooguna ciqaabta fool xun guud ahaan jeelasha uu Woyaanuhu kuciqaabo shacabka S.Ogadnia marka laga reebo jeelka caanka ah ee Jeel Ogaden looyaqaano kaasoo uu Gumaysigu kasameeyay Magaalada Jigjiga.
Bishan aan kujiro oo kaliya waxaa laxaqiijiyay in Jeelka Godey lakeenay tiro kor udhaafaysa 100 muwaadin kuwaasoo badankood laga soo qabqabtay deegaannada looyaqaano Bangilaad iyo Boodh-Caano. Dadkan rayadka ah ee sida waxshinimada leh loola dhaqmay yaan iyagu wax danbi ah ooy galeen uusan jirin.
Gadoodkan uu gumaysigu kugadooday shacabka rayadka ah een waxba galabsanin yaa sabab looga dhigayaa ineey keentay kadib markay dagaallo culculus oonan wali faah faahintooda helin. Dagaaladan yaa lasheegayaa ineey kadheceen deegaannadan aan soo sheegnay kuwaasoo sideey wararku sheegayaan aad loogu wiiqay Ciidanka Maxaysatada Woyaanaha. Maamul kusheega maqaar saarka ah ee Gobolka Shabeele yaa taariikhda Ogadenia meel madoow kagalay kadib markay qayb balaadhan kagaysteen gumaadka iyo baabi,inta shacabka kudhaqan gobolka Shabeele.